Chokwadi chiri humambo husina gwara - AFRIKHEPRI
Magnetic nanomedicine pamusoro peEbola uye AIDS?
Simba rekuporesa remafuta anokosha
Kubva uye nhoroondo yevhitamini B17, mushonga unoshanda wekenza
Chakras, nzvimbo dzesimba muvanhu - leadbeater (PDF)
Nheyo dzeEsoteric Philosophy - Blavatsky (PDF)
Kuenzana kwemadzinza evanhu - Anténor Firmin (PDF)
Bhuku Guru reTibetan Reiki (PDF)
Chenjerera Hurukuro Carter (2000)
TV Lobotomy: Chokwadi chesayenzi pamusoro pemigumisiro yeterevhizheni
Ubuntu: Chimiro Chorugare muAfrica
Iyo inoshamisa nyaya yevaranda vakakanganwa vaTrompelin vanotaurwa mumatanho echikara
Negro-African civilizations naProfesa Coovi Gomez
NIGERIA DESIGNS NEZVINHU ZVINOGONESA ZVINOGONA KUTI SATELLITE IYO ICHIZVINOGARA muna 2018
Kuvakazve kuzivikanwa kweAfrica pamasansi eAfrica
Africa cook, musheni wakatsaurirwa kuAfrica cuisine
Vane 25 vechidiki veAfrica vatengesi vanofambisa kondinendi
Senegal yakavaka musimamende makuru evanhu vemazuva ano
Mavambo ehupenyu hwevanhu maererano nemapiritsi eSumerian - chikamu 1 (Audio)
Kuisa mukushandisa simba remukati iyezvino - Eckhart Tolle (Audio)
Zvidzidzo zvishanu pamusoro pepfungwa dzakagadziriswa - Freud (Audio)
Kuti ave noupfumi uye humwe hupenyu hwemweya - Joseph Murphy (Audio)
Ichokwadi ihwo umambo husina nzira
mu TEXTS OF MATTHIEU GROBLI
Iwe wapindura "Chokwadi ihwo umambo husina nzira" Maminitsi mashoma apfuura
Kuchinja kwechokwadi hakuiti kuburikidza nehupfumi hwezvematongerwo enyika asi munguva pfupi. Chokwadi ihwo umambo husina nzira. Izvo hazvisi zveve ideologues, masayendisiti, ma-psychologists kana vezvematongerwo enyika.
Tinofanira kuva nechinangwa chekushandura kuitira kuti tisiyane nehuwandu hwemashure ekudzokorora kusingazivi. Nokudaro, tinofanirwa kuziva inguva yatiri mukati revolution kuburikidza nekushandura kwekutenderera. Iyi kuchinja kwepenhau, yechokwadi alchemical transmutation, ishanduko yenguva.
Tinofanira kuva nechitarisiko chitsva, maonero akazara emufananidzo wechinyorwa wehupenyu.
Nokudaro, chiratidzo chedu hachisiri "Maya", chirevo, asi "Mâât", quintessence yezvokwadi.
Zvadaro, sekudururwa kubva mumuviri wemuridzi wayo apo nguva inosvika, murume wacho amire kunze kwechimiro chake chakanaka kuti apfeke rineni risina kuchena, chiratidzo chekuzvarwa patsva uye kuberekwa patsva.
Yakanyorwa naMatieu Grobli